in-person IELTS & General English classes – BSI Learning Academy
Home Cambridge English Exams in-person IELTS & General English classes
Admin July 12, 2020 July 13, 2020 Cambridge English Exams, IELTS, IELTS intensive
Key English | in-person class
Weekend Class – 10:00 am to 12:00 noon (Sat & Sun)
Starting Date – 1st August 2020
Weekday Class – 5:00 pm to 7:00 pm (Mon & Wed)
Starting Date – 3rd August 2020
Fees: 90,000 kyats per month
Registration fees 40,000 kyats applies to new students.
Maximum Number of Learners per class – 8
Preliminary English | in-person class
Weekday Class – 5:00 pm to 7:00 pm (Tue & Thur)
Starting Date – 4th August 2020
IELTS | in-person class
Weekend Class – 1:00 pm to 4:00 pm (Sat & Sun)
Weekday Class – 9:00 am to 12:00 noon (Tue & Thur)
60 hours of teaching plus 40 hours of self-study/ homework
Total hours of studies – 100 hours
Fees: 490,000 kyats for 10 weeks
Our in-persons classes and individual coaching sessions are principally conducted by Teacher Wendy @ Hla Win May Oo, along withagroup of well-trained and well-qualified teaching associates.
💥 Level တစ်ခုကို (၃) လနဲ့ ပြီးသွားသူ အနည်းငယ်ရှိသလို၊ (၆) လလောက် လုပ်မှ အဆင်ပြေသွားတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ (၁) နှစ်ယောက်လုပ်မှ ကျေကျေညက်ညက်ရသွားကြပါတယ်။
💥အောက်ပါလင့်ခ်မှာ Level တစ်ခုကို (၁) နှစ်နှုန်းနဲ့ (၆) နှစ်တိတိ ကျွန်မတို့ရဲ့ Blue Sky International Learning Academy မှာ တက်ရောက်ခဲ့သူ အကြောင်းဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသက် (၉) နှစ်က စတက်ခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပြီးတဲ့နှစ်မှာ IELTS ဖြေဆိုတော့ Band Score 7.5 ရခဲ့ပါတယ်။ CEFR level နဲ့ ပြောရင် C1 ပါ။
💥 အောက်ပါ လင့်ခ်မှာတော့ နွေရာသီတွေမှာ အခါအားလျော်စွာ ကျွန်မတို့ရဲ့ Blue Sky International မှာဖွင့်တဲ့ Cambridge English (Movers, Flyers, KET, PET, FCE) တွေကို တစ်ဆင့်ချင်းစီ နှစ်တိုင်းလာတက်ပြီး အဆင့်ဆင့် ထူးချွန်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ IGCSE စာမေးပွဲတွေပြီးတာနဲ့ IELTS လာတက်ပြီး ဖြေတော့ IELTS Band Score 7.5 ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
💥 နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Blue Sky International မှာ 20-hour individual coaching တက်ပြီး IELTS ဖြေဆိုဖို့ လေ့လာလေ့ကျင့်ခဲ့သူပါ။ တစ်လအတွင်း အကျေအလည်လေ့ကျင့်ပြီး သွားဖြေတာ IELTS band score 8 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အမေရိကားမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ scholarship offer တွေလည်းရရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အကြောင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
💥 နောက်ထပ်ပြောပြချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့ မကြာမီကမှ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေ MBA ပြီးလာပြီဖြစ်တဲ့ Outstanding BlueSkyian တစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ သူမက Blue Sky International မှာ IELTS အတန်းရောက်သည်အထိ (၅)နှစ်ကျော်ကြာ ကျောင်းပိတ်ရက်များမှာ level အဆင့်ဆင့်တက်ရောက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS band score7ရရှိပြီး UK မှာ MBA တက်ဖို့ 50 % scholarship ကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အကြောင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
💥💥💥 Blue Sky International သင်တန်းကျောင်းလေး ဖွင့်လှစ်လာသည့် (၁၄) နှစ်အတွင်း အထက်ဖော်ပြပါကဲ့သို့သော ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ရာပေါင်းများစွာ ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
Outstanding BlueSkyian တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားကို စနစ်တကျ သင်ယူလေ့လာလေ့ကျင့်လိုပါက နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
💥 အောက်ပါ လင့်ခ်မှာ Blue Sky International Learning Academy က ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတဲ့ online class များရဲ့ သင်တန်းချိန်များ၊ သင်တန်းလခများ၊ သင်တန်းအပ်နှံရန် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
💥 အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ မိဘများ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ Blue Sky International Learning Academy မှာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတဲ့ သင်တန်းများနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိချင်တာ ရှိပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
📲 09 504 3135
📲 09 254 278 273
When you make the payment for the registration and fees, please mention your full name, and the class you are enrolling for. Then the screen shot should be sent to bsieducation.myanmar@gmail.com or BSI Facebook Messenger. If you want to book for your English language proficiency level test, you need to pay for the registration fees first. You will get to book the test from our available time slots.
Our online Cambridge English Classes for Learners of age5and above..
ဖော်ပြပါ Online English အတန်းများကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ အိုးတဂိုတက္ကသိုလ်မှာ ပါရဂူဘွဲ့ စာတမ်းရေးသားပြုစုနေသူ၊ သုတေသီလုပ်ခဲ့စဉ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်တွင်ပြုလုပ်သော နိုင်ငံတကာသုတေသီများ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဝင်ရောက်ပါဝင် တင်ပြရန် ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရသူ၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တက်စဉ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာ၊ ဘာသာစကား၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကောင်းမွန်သဖြင့် ဂျပန်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများလူငယ်ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်စဉ် တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ဒုတိယဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သူ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကား သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ (၁၄) နှစ်ကျော်ရှိသူ ဆရာမ ဒေါ်လှဝင်းမေဦး ဦးဆောင်၍ CEFR Level (C1/ C2) အရည်အချင်းရှိသော ဆရာမများက လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Facilitation & Interaction Platforms – Facebook Group & Zoom
Cambridge English Classes for Adults, Cambridge English Classes for Young Learners, Cambridge English Exams, IELTS classes, IELTS Weekday Classes, IELTS Weekend Classes, IELTS with Teacher Wendy, Key English, Preliminary English. Bookmark.